आवश्यकता नियमित अनुगमनको – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबारे छलफल टुंगिएको छ । सत्तापक्षका सांसद्ले बजेट समाजवाद उन्मुख रहेको दाबी गरेका छन् भने प्रतिपक्ष सांसद्ले बजेटलाई ‘कागजको घोडा’को संज्ञा दिँदै यसले केही बोक्न पनि नसक्ने र यो हिँड्न पनि नसक्ने आरोप लगाएका छन् । जेजस्ता दाबी, विरोध भए पनि बजेट पूर्ण स्वीकार्य हुँदैन र हुन सक्दैन पनि । सरकार र प्रतिपक्षबीच जेजस्ता जुहारी चले पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नु सरकारको पहिलो चुनौती हो । बजेटले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्ने विषय हो । सरकारले समाजवादी बजेटको दुहाई दिइरहँदा बजारमा भने अन्तःशुल्क बढेको बहानामा व्यापारीहरुले मनोमानीरुपमा मूल्य वृद्धि गर्न थालेका छन्, जसको असर उपभोक्ताको भान्सादेखि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा देखिन थालेको छ । व्यापारीहरुले उपभोग्य सामग्रीमा जथाभावी भाउ बढाउँदा उपभोक्ता नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । जिम्मेवार भनिएका निकायले बजार अनुगमनमा ध्यान नदिँदा बजेट भाषणअघि साविककै कर तिरेर ल्याइएका सामानमा समेत मूल्य बढाएर बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । बजेट भाषणको बहानामा व्यापारीहरुले मनोमानी ढंगले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउँदै आए पनि नियमन निकायको लापर्बाहीले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।
ओली सरकारका सबै मन्त्रीहरुले आर्थिक समृद्धिको रटान लगाउन छाडेका छैनन् । सरकारले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएर कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । किनभने, इन्धनको मूल्य वृद्धिको बहानामा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको भाउ जथाभावी बढाउनु कुनै मानेमा उचित मान्न सकिँदैन । सरकारले यतिबेला भाषणबाजीभन्दा अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोक्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्र्नेे हो । उपभोग्य सामग्रीको जथाभावी मूल्य बढाइँदा बजारभाउ अनियन्त्रित हुने जोखिममात्र होइन, उपभोक्ता सधैँ मर्कामा परिरहने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ । सरकारले मूल्य वृद्धिसम्बन्धमा नियमन तथा बजार अनुगमनतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ । बजेट भाषणकै कारण मूल्य वृद्धि हुने कदापि होइन, त्यसका लागि करको दर पनि बढ्नुपर्छ । तर, नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव गरी मूल्य वृद्धि गर्ने संस्कार चल्दै आएको छ । सर्वसाधारणमा बजेट भाषणपश्चात् महँगी बढ्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको पाइन्छ । सरकारको उदासीनताका कारण कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुँदा शक्तिशाली भनिएको सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्रै सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् ।
गत वर्षको बजेट ल्याउँदा डा. खतिवडा सर्वाधिक आलोचित भएका थिए । यसपालि सांसद् बजेट, कर्मचारीको तलब वृद्धि, व्यवसायीलाई छूट सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र अशक्तको भत्ता वृद्धि गरेर चर्चामा छन् । तर दुर्भाग्य ! बजेटको अधिकांश हिस्सा वितरणमै सकिएको छ । संसद्मा छलफल भएको बजेटमाथि न बहस हुनसक्यो, न सर्वसाधारणले चासो नै दिए । सर्वसाधारणको चासोको विषय त उनीहरुले दैनिकरुपमा उपभोग गर्ने दाल, चामल, तेल, चिनी, सागसब्जी नै हो । यी वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि भइरहँदा अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्ने सरकार मूकदर्शक बन्नुचाहिँ अर्को विडम्बना हो । यतिखेर इन्धनको मूल्य बढ्दा हवाई भाडा, सडक यातायात, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनेमा कुनै शंका छैन । सरकार सुशासनको गफ दिइरहने अनि सर्वसाधारण भने महँगीको चपेटामा पर्ने नियतिबीच कत्ति तारतम्य मिलेको छैन । सरकारले चाहने हो भने जस्तोसुकै बेथिति र विकृति नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइन । आर्थिक समृद्धि भनेको सबैथोकको मूल्य वृद्धि हुनु कदापि होइन । बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएकाले उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित गरिरहेका कालोबजारी र व्यापारीलाई निरूत्साहित गर्न निरन्तर बजार अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ ।
प्रसन्नता हाम्रो पहिचान